शीर्षकमा बाइबल पदहरू: डिप्रेसन -> जीवन
आखिरमा दाजुभाइहरू, तिमी सत्‍य, असल, ठीक, स्‍वच्‍छ, सुन्‍दर, आदरणीय र प्रशंसनीय कुरामा मन लगाओ।
परमप्रभु आफैं तिमीसँग रहनुहुनेछ र तिम्रो अगुवाइ गर्नुहुनेछ। उहाँले तिमीलाई धोका दिनु वा त्‍याग्‍नुहुन्‍न। यसकारण साहस नहराऊ र डर नमान।”
 मैले परमप्रभुको सहायता धैर्यसित पर्खिरहें, तब उहाँले कान थाप्‍नुभयो र मेरो पुकार सुन्‍नुभयो। मलाई डरलाग्‍दो खाडलदेखि, नाश गर्ने दलदले धापदेखि उहाँले निकाल्‍नुभयो। उहाँले मलाई चट्टानमाथि राख्‍नुभयो र सुरक्षित पार्नुभयो। उहाँले मलाई एउटा नयाँ गीत, हाम्रा परमेश्‍वरलाई प्रशंसाको स्‍तुतिगान गाउन सिकाउनुभयो। यो कुरा देख्‍ने धेरै जनाले चेतावनी पाउनेछन् र तिनीहरू परमप्रभुमा भरोसा राख्‍नेछन्।
तर हे परमप्रभु! सधैँ खतरादेखि जोगाउने तपाईं मेरा ढाल हुनुहुन्‍छ, तपाईंले मलाई विजय दिनुहुन्‍छ र ममा फेरि साहस भरिदिनुहुन्‍छ।
किन म यति अफसोसी छु? किन म यति कष्‍टित छु। म परमेश्‍वरमा आफ्‍नो आशा राख्‍नेछु र फेरि पनि म आफ्‍ना परमेश्‍वर र उद्धारकको प्रशंसा गर्नेछु।
१ पत्रुस ५:६-७
 त्‍यसो हुँदा परमेश्‍वरका शक्तिशाली हातमुनि रहेर नम्र होओ र उहाँले तिमीहरूलाई ठीक समयमा ठूलो बनाउनुहुनेछ। आफ्‍ना सबै फिक्री उहाँका अघि राखिदेओ किनभने उहाँले नै तिमीहरूको हेर-विचार गर्नुहुन्‍छ।
 किनभने मलाई पूरा थाहा छ, कुनै कुरोले पनि ख्रीष्‍टको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्‍दैन। नता मृत्‍युले, नता जीवनले न स्‍वर्गदूतहरूले, नता संसारको शक्तिले, नता अहिलेको, नता पछिको न माथिको न तलको, सृष्‍टिका कुनै शक्तिले पनि हामीलाई परमेश्‍वरको प्रेमबाट अलग गर्न सक्‍दैन किनभने परमेश्‍वरले ख्रीष्‍टद्वारा हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ।
१ पत्रुस ४:१२-१३
 दु:ख-कष्‍टद्वारा तिमीहरूको जाँच भइरहेको छ तर यो कुनै नहुने कुरा भयो भनेर अचम्‍म नमान। तर ख्रीष्‍टको दु:खमा सहभागी भएका छौ भनी आनन्‍द मनाओ र उहाँको ठूलो महिमा प्रकट हुँदा तिमीहरू खुसी मनाउन सक्‍छौ।
 परमप्रभुले मानिसलाई ऊ जानुपर्ने बाटोमा डोर्‍याउनुहुन्‍छ र जसले उहाँलाई खुसी पार्दछ, उसलाई रक्षा गर्नुहुन्‍छ। तिनीहरू लडे भने पनि त्‍यत्तिकै लडिरहनेछैनन् किनभने परमप्रभुले तिनीहरूलाई मद्दत गरेर उठाउनुहुनेछ।
२ कोरिन्थी १:३-४
 हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्‍टका पिता र परमेश्‍वरको जय-जयकार होस्। उहाँ दयालु पिता र पूरा सान्‍त्‍वना दिनुहुने परमेश्‍वर हुनुहुन्‍छ। उहाँले नै हामीलाई सबै प्रकारका दु:खमा सान्‍त्‍वना दिनुहुन्‍छ। अरू दु:खमा पर्नेहरूलाई त्‍यसरी नै सान्‍त्‍वना दिन सकौं भनेर उहाँले हामीलाई हाम्रा दु:खमा सान्‍त्‍वना दिनुभएको छ।